मध्यराति प्रम र प्रधानन्यायाधीशबीच यस्तो कुरा भएकै हो त ? – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
२१ साउन, काठमाडौं । ‘हामीले भनेको तपाईंले मान्ने, तपाईंलाई हामीले बचाउने !’ प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच मध्यरात यस्तो संवाद चलेको ‘सूचना’ पाएपछि देशका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शुक्रबार अपरान्ह बानेश्वरको अर्याल होटलमा भेला भए । प्रधानमन्त्री अध्यादेशमार्फत आफ्नो अनुकूलतामा संसद विघटन वा चुनाव चिह्न सुनिश्चित गर्दै पार्टी विभाजनतर्फ अग्रसर भएको आशंका गरिएकै बेला त्यसलाई वैधता दिने प्रयोजनका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रभावित पार्न खोजिएको देशका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले अनुमान लगाएका छन् ।
उक्त भेलामा के–के भए ? यसबारे भेलाबाट फर्र्किकएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले आफ्नो फेसबुक वालमा यस्ता लेख्नुभएको छ, ‘अदालतमा भ्रष्टाचार छ, बिचौलिया छन्, हिजो गोजीबाट न्यायाधीश टिप्ने काम भयो । असल मानिसको मानमर्दन भयो, न्यायाधीश भएका एकजनाले आत्महत्यासम्म गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सेटिङ मिलाउने कार्यका बारेमा रोचक कुराहरू भए । न्यायाधीश हुन कुद्नेका बारेमा पनि कुरा उठे । संसदले के हेरेर न्यायाधीशको नियुक्ति सदर ग(यो ? अब यो पनि उठ्नुपर्ने कुरा
उठे । सुनुवाइको समयमा सांसदका घरमा न्यायाधीशहरु पुगेका, केही सांसदले हात चिल्ला पारेका कुरा पनि उठे ।